COVID-19 ကို Apple နှင့် Google တို့ပူးပေါင်း Androidsis
ခြွင်းချက်အခြေအနေများနှင့်အကျပ်အတည်းများသည်တစ်ခါတစ်ရံလူတို့၏လူ့ဘောင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြောက်မြားစွာမြင်နေနေကြသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုအမူအရာ ဒီထူးဆန်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့။ တူညီသော ဦး တည်ချက်ဖြင့်လှော်ခတ်လိုသောဆန္ဒသည်မည်သည့်စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုနားမလည်ပါ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးဥပမာကတော့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုဖြစ်သော Apple နှင့် Google တို့၏ယာယီပြည်ထောင်စုဖြစ်သည် ရောဂါကူးစက်ရန်။
သူတို့တင်ထားရုံသာမဟုတ် ၎င်း၏ကြီးမားသောစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၏နိုင်ငံသားများ၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ။ သူတို့သည်အတူတကွအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်အတူတကွလာကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်အားလုံး၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ coronavirus ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်ခြေရာခံခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖန်တီးခြင်း.
coronavirus ကို Apple နှင့် Google တို့ပူးပေါင်း
ထိုကဲ့သို့သောကြီးစွာသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုလက်ချင်းတွဲအလုပ်လုပ်ကြသည်ကိုမြင်လျှင်ဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့မြင်ဖို့မျှော်လင့်ထားဘယ်တော့မှတစ်ခုခု။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောအခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်မှီခိုနေရသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြိုင်ဆိုင်မှုများကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့ကြပြီ။ ဒီအထင်ကရကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီချက် ခြေရာခံကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူများဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်သည် ရောဂါကူးစက်ခံရသူများ။
စိတ်ကူး သောကွောငျ့ဖွစျသညျ စမတ်ဖုန်းကတဆင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ခွင့်ပြုပါ လူတွေကြားမှာအဆက်အသွယ်တွေကိုခြေရာခံပြီးအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သဘောတူညီချက်သောသဘောတိုးတက် system သည် Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီအချိန်လေးမှာသူရှိတယ် အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်၌တည်၏။ သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်တယ် ကိရိယာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ ဘယ် operating system နှစ်ခုလုံးအတွက်, အနာဂတ် App ကိုခြေရာခံရန်လုံခြုံစွာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်.
ဒီသပိတ်မှောက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖန်တီးဖို့ပဲ ပြည့်စုံခြေရာခံခြင်းပလက်ဖောင်း။ သူမ၏မှတဆင့်နှင့် ဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှုများကကမ်းလှမ်းဒေတာနှင့်အတူ သူတို့ရဲ့ operating system ကိုမသက်ဆိုင်၊ တိုင်းတာရန်ဒေတာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည် ကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အားလုံး, ဟုတ်ပါတယ်, အသုံးပြုသူများ၏တာဝန်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ။ ဤကုမ္ပဏီများသည်အလားအလာနည်းပါးသောကြောင့်သင်၏အကူအညီကကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » COVID-19 ကို Apple နှင့် Google ပူးပေါင်း
Telegram အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အချက်များ - တေးဂီတ၊ စီးရီး၊ ရုပ်ရှင်၊ အပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ